Umaka: ukwabelana | Martech Zone
ULwesihlanu, February 22, 2019 NgeSonto, ngoMashi 7, 2021 Douglas Karr
Esinye sezizathu zokuthi ngibhale incwadi yami yokubhuloga ezinkampani eminyakeni eyishumi eyedlule kwakuwukusiza izethameli ukuthi zisebenzise ukubhuloga kwezentengiso zenjini yokusesha. Usesho alufani nanoma iyiphi enye indlela ngoba umsebenzisi wokusesha ukhombisa inhloso njengoba efuna ulwazi noma ecwaninga ngokuthenga kwakhe okulandelayo. Ukwenza ibhulogi nokuqukethwe kokuthunyelwe ngakunye akulula njengokuthi nje uphonsa amagama athile kumxube… kunambalwa impela
ULwesine, May 28, 2015 ULwesithathu, May 27, 2015 Douglas Karr
Sabelana nsuku zonke ngokuthunyelwe kwethu kubhulogi nangokuba khona emphakathini. Isisusa sethu silula - lapho sithola okuqukethwe okuhle noma sithola okuthile ngokwethu, sifuna ukukwazisa ngakho. Lokho kusenza isixhumi solwazi olukhulu futhi kunikeze inani kuwe, mfundi wethu. Ngokwenza njalo, sikugcina ubandakanyekile futhi sethemba ukujulisa ubudlelwano bethu nawe. Njengoba uqala ukusithemba ngolwazi olukhulu nezinsizakusebenza, thina